उत्तरी गोरखालाई फिल्म सिटी र स्याउको पकेट क्षेत्र बनाईने | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
Published On : २६ जेष्ठ २०७६, आईतवार ०८:५४
गण्डकी प्रदेशले उत्तरी गोरखालाई फिल्म सिटी र स्याउ पकेट क्षेत्र बनाउने भएको छ ।
शुक्रबार प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को नीति तथा कार्यक्रममा उत्तरी गोरखालाई फिल्म सिटी र स्याउ पकेट क्षेत्र बनाउने उल्लेख छ ।
प्रदेशले पर्यटन, उर्जा, कृषि, भौतिक पूर्वाधार र स्वरोजगारलाई प्रदेश समृद्धिको प्रमुख आधार मानेर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । विद्युत खपत बढाएर पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गर्ने, कृषिमा आत्मनिर्भर हुने, पोखरा चक्रपथ र उत्तर दक्षिण कोरिडोर निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि सारिएको छ ।गण्डकी प्रदेश सरकारले अर्को वर्ष एक घर एक सदस्य हुने गरी सहकारी संस्थाको विस्तार गर्ने नीति लिएको छ । मनाङ, मुस्ताङ र पोखरा–काठमाण्डौ–लुम्बिनीलाई गौतम बुद्ध स्वर्णिम त्रिकोणको रुपमा विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको छ । पर्यटनबाटै प्रदेशको समृद्धि हासिल हुने उद्घोषसहित सरकारले पदमार्ग, सडकमार्ग र हवाइमार्गको स्तरोन्नति गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ ।
प्रत्येक स्थानीय तहका औद्योगिक क्षेत्र स्थापना, एक स्थानीय तह एक उत्पादन, गण्डकी विश्व विद्यालय स्थापना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । प्रदेशका सबै घरमा धारा पुर्रुयाउने, दुई वर्षमा आवश्यक सबै ठाउँमा झोलुङ्गे पुल बनाइसक्ने योजना पनि अगाडि सारेको छ ।
अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले पुरानै नीति कार्यक्रममा भाषिक हेरफेर गरेको प्रतिक्रिया दिए । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम बढी व्यवहारिक भएकोले सबै कार्यान्वयन हुनेगरी बजेट विनियोजन हुने बताए ।